Barcelona Oo Go'aan Ka Gaadhay Waxa Ay Ka Yeelayso Xidiga Dhaawacyadu Dishoodeen Ee Ousmane Dembele. - Gool24.Net
Barcelona Oo Go’aan Ka Gaadhay Waxa Ay Ka Yeelayso Xidiga Dhaawacyadu Dishoodeen Ee Ousmane Dembele.
Kooxda Barcelona ayaan ilaa hadda helin wax qabadkii ay ka doonaysay xidiga kooxdeeda iyo xulka qaranka France ee Ousmane Dembele kaas oo dhaawac ka bixi waayay tan iyo markii uu Camp Nou ugu soo biiray lacagtii labaad ee abid ugu qaalisanayd.
Ousmane Dembele ayaa muddo saddex sano ah oo uu joogo kooxda Barcelona waxa uu inta ugu badan ku maqnaa dhaawacyo dhibaato wayn ku noqday waayihiisii ciyaareed waxaana hore u soo baxay in maamulka Barca ay suuqa xagaag iibin doonaan.
Laakiin waxaa hadda la ogaaday in kooxda Barcelona ay doonayso in ay Ousmane Dembele siiso hal fursad oo kama danbays ah taas oo keenaysa in xili ciyaareedka soo socda uu sii joogi doono Camp Nou.
Barcelona ayaa rekoodhka kooxdeeda suuqa kala iibsiga u jabisay Ousmane Dembele kadib markii ay si qasab ah kaga soo saareen Borussia Dortmund laakiin waxa uu ka bixi waayay dhawaacyo keenay in uu dhawr qaliin oo culus maray.
Muddadii uu Ousmane Dembele joogay Barcelona waxa uu awooday in uu saftay 74 kulan oo kaliya isaga oo soo dhaliyay 19 gool oo kaliya halka uu sameeyay 17 gool caawin waana xog aad ugu liidata ciyaartoy laga soo bixiyay aduunkii qaaliga ahaa 135 ka milyan gini ahaa.
Wargayska Diario Sport ayaa shaaaciyay in Barcelona ay fursad kama danbays ah siin doonto Dembele waxaana la shaaciyay in tababare Quique Setien uu la dhacsan yahay xidiga reer France taas oo keeni doona in xili ciyaareedka soo socdaa uu noqon doono mid wax go’aamin kara.
Ousmane Dembele waxa uu inta xili ciyaareedkan ka hadhsan ku maqnaan doonaa qaliin adag oo uu maray waxaana la filayaa in xili ciyaareedka cusubi uu soo gali doono isaga oo wali ka shaqaynaya sidii uu taam u noqon lahaa.
Barcelona ayaa la shaaciyay in ay suuqa kala iibsiga soo dhigtay Antoine Griezmann kaas oo markiisa u muuqda in uu fashilmay balse xaalada Ousmane Dembele ayaa ka duwan Griezmann maadaama oo uu kooxda si fiican ulahaystay balse ay dhaawacyadu dishoodeen.
In Barcelona ay suuqa soo dhigtay Griezmann waxay sii xoojin doontaa in Ousmane Dembele uu heli doono fursad kale oo uu ugu dagaalami karo in uu waayihiisa ciyaareed ee Baraca ka badbaadiyo qaabka xun ee uu hadda yahay.